Zon`ny olona no misitraka rano sady mandoa vola ka tokony hahazo tolotra mifanaraka amin`izay. Manakorontana ny lafiny toekranea ny fahatapahan-drano. Ny rano dia olana lehibe ary tafiditra ao amin`ny sehatra ara-tsosialy. Mila fanatsaràna izany mba hahatonga azy ho tosika eo amin`ny toekrana. Mila ezaka ny sehatry ny rano mba hampitomboina izay sehatra sosialy. Ny 80-%n’ny mponina eto Madagasikara dia tantsaha avokoa, izany hoe miaina amin’ny fambolena sy fiompiana. Raha tsy mandeha ny rano entina manatsara ny fiaianan’ny sarambem-bahoaka dia tsy misy ny fampandrosoana. Manakorontana ny toekarena satria tsy afaka mamokatra, hany ka lasa manasongadina ny fahantrana lalina eto amin`ny firenena. Tafiditra ao amin`ireo firenena miisa 189 mpikambana eo anivon`ny firenena mikambana tokony hisitraka ny fampihenana ny tahan`ny fahantrana ho amin`ny antsasany i Madagasikara toy ny fanatsarana ny rano eto amintsika eo amin`ny 68% saingy mbola 32% anefa no tratra hatreto. Misy zavatra maika tsy maintsy atao fa misy kosa laharam-pahamena na samy maika aza ka hahafantarana izay tena fototry ny fampandrosoana na ara-toekarena na ara-tsosialy